Hordhaca: Barcelona Iyo Atletico Bilboa Messi Oo Caawa Safandoona Kulankiisa 350aad Ee La Liga | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhaca: Barcelona Iyo Atletico Bilboa Messi Oo Caawa Safandoona Kulankiisa 350aad Ee La Liga
Hordhaca: Barcelona Iyo Atletico Bilboa Messi Oo Caawa Safandoona Kulankiisa 350aad Ee La Liga
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 28-08-16 9:18 AM Kooxda Barcelona ayaa u safreeysa Atletico Bilboa kulankeeda labaad ee La Liga,waxaana kooxda Enrique ay eeganeysaa guusheeda labaad kadib qaabkii cajiibka ahaa ee todobaadkii lasoo dhaafay ay ku furteen horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa bilaabandoonto nolo la’aanta goolhaayihii laba xilli ciyaareed kaliya kula guuleeystay 8 koob oo kala duwan , waana Bravo oo ku biiray kooxda Manchester City.
Sidoo kale kooxda waxaa ka maqan Neymar oo aan wali kasoo tegin Brazil maadaama lagu daray safka xidigaha Brazil ee ka qeeyb gelayaa ciyaaraha Isreeb reebka koobka aduunka ee 2018.
Kulanka: Atletico Bilboa vs Barcelona.
Garoonka: San Mamés Bilbao.
Saacada: 9:15 Caawa.
Atletico Bilboa ayaa laga adkaaday shantii kulan ee ugu dambeeysey ay la dheeshay kooxda Barcelona , laakiin ma dhicin in intaas wax ka badan si xiriir ah kooxdaan looga adkaado tan iyo 1992, xilligaas oo laga adkaaday 8 kulan oo xiriir ah.
Kooxda lagu naaneeso Lions ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay kaliya hal kulan , 37dii kulan ee ugu dambeeysey ay wajahday Barcelona horyaalka La Liga waana ciyaar dhacday December 2013.
Lixdii kulan ee ugu dambeeysey kooxahaan ay wada ciyaareen, Barcelona ayaa cel celis ahaan kulan waliba dhalineysey shan gool.
Macalinkaan hogaaminaya kooxda Bilbao ee lagu magacaabo Ernesto Valverde ayaa waxaa uu Barcelona ka adkaaday laba kulan 16 kii kulan ee ugu dambeeysey ee isagoo Macalin ah wajahay Barcelona.
Barcelona ayaa wajahday kooxda Atletico Bilboa kulanka labaad ee La Liga afar jeer, waxaana kooxda Enrique ay badisay afar jeer, halna waa laga adkaaday.
Luis Suarez ayaa dhaliyey goolal seddexdii kulan ee ugu dambeeysey La Liga uu wajahay kooxda Atletico Bilboa, waana shan gool , laba kamid ah waxaa uu ku dhaliyey isagoo jooga garoonka caawa.
Lionel Messi ayaa caawa safandoona kulankiisa 350aad ee horyaalka Spain.
Dhaliyaha kooxda Bilboa Aduriz ayaa dhaliyey laba gool seddexdii kulan ee ugu dambeeysey ee uu wajahay kooxda Barcelona.